Elu nke Yellowstone supervolcano na-agba mbọ! | Netwọk Mgbasa Ozi
Elu nke Yellowstone supervolcano na-agba mbọ!
Nnyocha nyocha ala nke United States (USGS) ebipụtala maapụ na-egosi nrụrụ nrụrụ enwere n'ahụ ala. Mgbanwe ahụ emeela mgbe nrụgide nke ala ọma jijiji nke afọ 2 gara aga kpatara. Gburugburu ugwu a nke ugwu mgbawa, nke bụ ugwu a, nweela ịma jijiji nke 1500 nke ịdị iche dị iche iche n'ime ọnwa abụọ gara aga.
Ihe mere o ji buru caldera, ma obughi otu ugwu nke oma, bu nnochite nke ike nke ike ya. Supervolcano dị ike nke na ugwu ahụ dum n'onwe ya na-ada ma daa na ya. N'aka nke ya na-akpụpụta ebe mgbawa, nke buru ibu karịa nke nkịtị.
Nka na ụzụ data banyere ala ọma jijiji Yellowstone
Kemgbe ntọala ala ọma jijiji malitere na June 12, edere karịa ihe ịma jijiji 1500. Edere ịma jijiji na Yellowstone site n'otu ala ruo 14 kilomita miri emi. Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu e dekọtara bụ 5 na ọkwa Richter.
Nnukwu ihe egwu nke Yellowstone na-abịa karịa ihe niile sitere na nsonaazụ ya nwere ike inwe. Nsonaazụ oke ugwu nwere ike ịnwe, ọ ga-abụ ihe ruru 100 ugwu mgbawa. Achọpụtakwala ya na nsonaazụ ndị a na-eweta na ndekọ ndekọ ihe mgbe ochie, nwere ike gbanwee ihu igwe. Ọ bụ ezie na a na-enyocha ihe niile dị egwu, ọ bụ eziokwu na ndị sayensị amachaghị etu esi ebu amụma mgbe ha ga-eteta. Na nso nso a supervolcano nke na-egosi ihe ịrịba ama nke ụba ọrụ bụ nke Campi Flegrei, .tali, bụ onye a na-ahụ maka nlekota ya.
Mgbawa nke ugwu mgbawa abụọ ga-enwe nsonaazụ maka ọtụtụ nde mmadụ bi gburugburu ha. N'agbanyeghị nke a, maka ugbu a ekwesiri ighota na osighi ike. Ọfọn, n'ọtụtụ oge, ọ bụ ezie na ọrụ na-ebute ha ụzọ, ọrụ a anaghị esochi mgbawa mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Elu nke Yellowstone supervolcano na-agba mbọ!
"Otu ihe, N'ebe ahụ" Na-atụ aro ka Readinggụ na Mgbanwe Ihu Igwe
Ihe egwu oku maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Spen niile dị n'etiti oke na oke